Home casino cruise clearwater beach fl events do online casinos pay real money download
Ọchịchị Buhari na-eji otu puku mmadụ dị ike 1000, gụnyere ndị agha, ike ugboelu, ndị uweojii na ndị na-agbachitere ndị mmadụ iji mee ka ndị agha na-akpaghasị obodo ndị dị na Zamfara State.
ugboelu aha na zamfara
Mgbe ndi isi ndu nke President Muhammadu Buhari kwadoro, ndi agha Nigeria (NAF) amalitela ikenye ndi agha ugboelu na Katsina, n’ọdụ ụgboelu na nso nke Zamfara State iji mee ngwa ngwa na nke oma maka nsogbu nke ndi agha.
“Nke a enwebeghị ike na n’oge gara aga n’ihi na enweghị ebe nchekwa ihe ọkụkụ dị na Katsina, ma NAF echepụtawo ụzọ na nsogbu ahụ”, Malam Garba Shehu, SSA Media na President kọwara.
Dị ka ya si kwuo, Onyeisi ahụ enyekwara ikike nke NAF kwadoro, nke na-ahụ maka onyunyo onyunyo na-ahụ maka mbara igwe iji nyere aka n’ịchọpụta nke ọma na ebe ndị ohi.
“Gọọmenti ga-aga nke a n’ihi enweghị njedebe nke nlele anya, dị ka iji nkà na ụzụ satellite mee ka ọrụ nke NAF bụrụ nsogbu. Mgbe ndi nduzi si n’aka President, na ngwụsị izu, Onye isi nke ụgbọelu, Air Marshall Sadiq Abubakar, nọ na Gusau ebe o zutere Deputy Gọvanọ nke Ọchịchị, “Garba kwuru. Uchịchị Buhari na-eji ike dị ike 1000, gụnyere ndị agha, ike ụgbọ elu, ndị uweojii na ndị na-agbachitere ndị mmadụ iji mee ka ndị agha na-atụ egwu obodo ndị dị na Zamfara State.
Mgbe ndi isi ndu nke President Muhammadu Buhari kwadoro, ndi agha Nigeria (NAF) amalitela ikenye ndi agha ugboelu na Katsina, n’ọdụ ugboelu na nso nso nke Zamfara State iji mee ngwa ngwa na nke oma maka nsogbu nke ndi agha.
“Gọọmenti ga-aga nke a n’ihi enweghị njedebe nke nlele anya, dị ka iji nkà na ụzụ satellite mee ka ọrụ nke NAF bụrụ nsogbu. Mgbe onye nduzi nyere ntụziaka n’aka onye isi, na ngwụcha izu, Onye isi ugboelu, Air Marshall Sadiq Abubakar, nọ na Gusau ebe o zutere Deputy Gọvanọ nke Ọchịchị “, Garba kwuru.
“Onye isi nke ndị ọrụ ụgbọelu kwughachiri nkwa nke onye isi ahụ na ya agaghị ahapụ ndị mwakpo mwakpo ya, na-ekwusi ike na nchebe bụ otu n’ime ogidi aka nke mgbasa ozi mgbasa ozi ya ma ọ dịghị onye ndú ga-enwe obi ụtọ ịhụ ụmụ amaala ya gburu ndị omempụ n’ofe obodo “.
Ntụziaka ndị nlekọta ọhụrụ ahụ mere ka mmegide nke ndị ohi na mpaghara ụfọdụ nke steeti pụta. Na July 24, ndị agha ahụ wakporo obodo ndị dị na District Mashema nke steeti mpaghara obodo Zurmi.
Ndị agha jidere mmadụ atọ n’ime ndị ohi. Ma na Satọdee, ndị na-eto eto na-akwa iko na obodo Zurmi, wakporo ndị uweojii na-achọ ka ndị uweojii nyefee ndị agha atọ ahụ a na-enyo enyo na ndị agha jidere ha.
IHE MERE BUHARI JI BURU ONYEISI UWA NKE ICC &#8211; ENVOY KPORO
Onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii nke onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii, SP Muhammad Shehu bụ onye kwadoro ihe ahụ mere ndị nta akụkọ na Gusau na Sunday kwuru na a wakporo ndị uweojii na mgbede Saturday.
Shehu kwuru na ndị na-eto eto iwe na-agbakwa ụgbọ ala na ụfọdụ ọgba tum tum na ọdụ.
N’ụbọchị Sunday, Ọkà okwu nke ụlọ nzukọ nke Zamfara, Alhaji Sanusi Rikiji kọrọ banyere mpụ mmadụ 15 na Saturday na Maradun mpaghara mpaghara nke steeti.
Ntuziaka kachasị ọhụrụ nke onyeisi oche ahụ nwere ike ịchọta nchebe na steeti nwere ike ịnwe nchebe ọdịnihu n’ọdịnihu.
Dị ka Garba, President Buhari kemgbe 2015 ka na-enwe nkwa na nkwa ya iji kwadebe ma kpalie ndị agha obodo na ndị ọrụ nchebe ndị ọzọ. Ndị agha na ndị ọrụ nchebe ndị ọzọ ugbu a ka edoziri onwe ha nke ọma ma kpalie ha ịrụ ọrụ ha.
“Ya mere, ndị isi oche ahụ rịọrọ ndị Niger niile ka ha dịrị n’otu ma jiri otu okwu kwuo banyere nsogbu nchedo ma gbaa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ume ka ha kwụsị ịme ihe ịma aka nchedo obodo.
“Ndị na-ekpe ekpere maka onyeisi ala ka ha ghara ime mgbalị a nwere ike iji ya tụnyere onye na-atụgharị onwe ya n’obi ma na-eme ememe ya. Na nke a, nchebe ekwesịghị ịdaba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweghị isi n’ihi na ime nke a nwere ike ime ka ndị na-eyi ọha egwu na ndị omempụ ndị ọzọ na-egbu ọchụ “.
Tags: BuharihotihenemeIHENEME NOBODOihenemenobodoIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsnobodoPOLITICSstateugboeluupdatezamfara